चिन्ता उन्नतिको « Kamana
‘हर कोही अर्को मानिस पेसाका लागि इमानदार हुनुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो खाँचो ब्युरोक्रइट्स र पोलिटिसियनमा छ’, नीर शाह भन्छन्– ‘अरु क्षेत्रजस्तै हाम्रो कला क्षेत्रमात्र यसबाट अलग भएर रहन सक्दैन । हामी पनि विस्तारै इमानदारिता र निष्ठा गुमाउँदै गएका छौं । नेपाली सिने क्षेत्रका लागि यो पटक्कै राम्रो संकेत होइन ।’
नेपाली सिनेमाको रूप फेरिएको छ, आकार फेरिएको छ, लगानी बढेको छ, तुलनात्मकरूपमा व्यापार, आम्दानी र मुनाफा पनि बढेको छ । बर्सेनि करिब ८ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ यो क्षेत्रमा लगानी हुन थालेको छ । सफलता कम पाए पनि सफल व्यापार गर्ने सिनेमाको संख्या पनि कम छैन । सरकार र राज्यले हालसम्म उद्योगको दर्जा र मान्यता दिई नसके पनि अन्य कुनै उद्योगधन्दाभन्दा कम लगानी यो क्षेत्रमा छैन ।
अन्य उद्योगजस्तै सिनेमा उद्योगको विस्तार दिन प्रतिदिन भइरहेको छ । नेपालमा सीमित यसको व्यापार व्यवसाय विदेशमा पनि बढ्न थालेको छ । विदेशमा नेपाली सिनेमाको व्यापार व्यवसाय व्यवस्थिपतरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन अर्कै कुरा, तर विगतको तुलनामा यसको व्यापारिक आकार फराकिलो हुँदै छ ।
अभिनेता भुवन केसीलाई लाग्छ– ‘हामीले चलचित्र क्षेत्रबाटै पनि देशको उन्नति गर्न सक्छौं भन्ने कुरा भुलिरहेका छौं । त्यसका लागि नेपाली चलचित्रलाई दूरदर्शी सोचबाट संसारभरि फैलाउनुपर्छ । हाम्रो चलचित्रलाई संसारभर पैmलाउन सक्यो भने डलर, यान, पाउन्ड नेपालमै भित्रिन्छ ।’
अन्य कतिपय उद्योग पनि फस्टाइरहेका छन्, तर विगतमा ठूलो आकार पाएका उद्योग कल–कारखाना बन्द हुने र विस्थापित हुने क्रम पनि कम छैन । यसको कारण के होला ? सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशले यत्रो समयसम्म पनि आर्थिकरूपमा उन्नति गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
पटक–पटकको क्रान्ति र आन्दोलन, अस्थिर सरकार र राजनीति । यी नै कारण मुलुकका लागि आर्थिक समृद्धि कहिल्यै प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछाडिको संघीय गणतन्त्रपछि अब पालो भएको छ आर्थिक समृद्धिको । कलाकर्मीको नजरमा असल नियत र इमानदारिता तथा भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाएमात्र देशले आर्थिकरूपमा काँचुली फेर्न सक्नेछ । नेपाली फिल्म तथा कला क्षेत्रका कलाकारले निष्ठा र इमान्दारिता प्रदर्शन गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सके देशले आर्थिकरूपमा उन्नति गर्न सक्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हो पक्कै पनि अब सबै क्रान्ति छोडेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला भएको छ । यसका लागि अरु केही गर्नै पर्दैन । केवल नेताहरू देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नतिर लागिदिए पुग्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यमात्र गर्न सके पनि देशले उन्नति गर्न सक्नेछ । सरकारले गर्ने मुख्य काम भनेको बाटोघाटोको निर्माण र विस्तार, बत्ती र पानीको सुविधा तथा सुरक्षा हो ।
नायिका रेखा थापा भन्छिन्– ‘जबसम्म महिला आत्मनिर्भर हुँदैनन्, आर्थिकरूपमा देशको उन्नति हुनै सक्दैन । पुरुष र नारी दुवै जनाले काम गरे एकको आम्दानीले घर व्यवहार चल्छ भने अर्कोको वचत हुन्छ र त्यो परिवारको उन्नति सम्भव हुन्छ ।’
सरकारले यतिमात्र हेरिदियो भने अरु सबै काम जनताले गर्नेछन् र गरिरहेका छन्’, हास्यव्यंग्य अभिनेता तथा समाजसेवी मदनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्– ‘जनताले आ–आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पूरा गरिरहेका छन् । मजदुरले मजदुरी गरिदिएका छन्, चालकले गाडी गुडाइदिएका छन् ।
शिक्षासेवी र स्वास्थ्यसेवीले स्कुल कलेज, अस्पताल सञ्चालन गरिदिएका छन् । उद्योगपति र व्यापारीले कलकारखाना र उद्योग चलाइदिएका छन् । यो सबैको मेनेजमेन्ट गर्ने काम सरकारको हो ।’ मदनकृष्ण थप्छन्– ‘सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा नगरिदिएर देशले आर्थिक उन्नत गर्न नसकेको हो । अहिलेको चुनावमा वाम गठबन्धन अगाडि आएको छ । अब स्थायी सरकार होस्, भ्रष्टाचार रोकियोस् । सबै कुरा आफसेआफ ठीक हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ, देश समृद्ध हुनेछ । तर, अब पनि स्थायी सरकार भएन र भ्रष्टाचार रोकिएन भने देश कहिल्यै सुध्रिँदैन । कहिल्यै माथि जान सक्दैन ।’
‘देशलाई कला र संगीतको क्षेत्रबाटै पनि आर्थिक समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ’, संगीतकार दीपक जंगम भन्छन्– ‘संगीतको क्षेत्रबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लान सकिन्छ । हाम्रोमा जो चिज छ, त्यसले नेपालको महङ्खवलाई दर्शाउन सकिन्छ ।’
अभिनेता तथा रंगकर्मी हरिहर शर्मा पनि इमानदारितालाई नै जोड दिन्छन् । ‘मुखले बोलेर, भाषण गरेर मात्र देशको उन्नती सम्भव हुँदैन, कामै गरेर देखाउनुपर्छ । नीतिगतरूपमा पनि स्पष्टता हुनुपर्छ । त्यसपछि जनताको विश्वास र साथ लिएर सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदारपूर्वक काम गर्यो भने राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन कत्ति पनि समय नै लाग्दैन’, शर्माको भनाइ छ– ‘राजनीति, उद्योग, कलाकारिता सबै क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक काम भयो भने देश समृद्ध हुन सम्भव छ । फिल्म उद्योग पनि शक्तिशाली उद्योग र क्षेत्र हो । यसबाट कतिले रोजगारी पाएका छन्, अर्बाैंको लगानी भएको छ । यो सांस्कृतिक उत्पादन गर्ने क्षेत्र कम महङ्खवपूर्ण हुन्छ र ? सेवामूलक यो क्षेत्रलाई पनि राज्यले महङ्खवपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्छ । देश विकास र पूर्वाधारको साथसाथै चलचित्र क्षेत्रको पनि उन्नति भयो भने आम्दानी हुन्छ, बढ्छ । आम्दानी भए क्रयशक्ति बढ्छ र देशको उन्नति हुन्छ ।’
अभिनेता, गीतकार तथा निर्देशक नीर शाह निष्ठा र इमानदारिता कायम गर्न सके देश विकास हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘सबै जनासँग व्यापाकमात्रामा पेसागत निष्ठा र इमानदारित हुनु आवश्यक छ। आर्थिक समृद्धि र उन्नतिको कुरा गर्दा पेसागत निष्ठाको कुरालाई पछाडि राख्नै मिल्दैन । हर कोही अर्को मानिस र पेसाका लागि इमानदार हुनुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो खाँचो ब्युरोक्रइट्स र पोलिटिसियनमा देखिएको छ’, शाह भन्छन्– ‘अरु क्षेत्रजस्तै हाम्रो कला क्षेत्रमात्र यसबाट अलग भएर रहन सक्दैन । यसमा पनि इमानदारिता र निष्ठाको कुरा लागू हुन्छ । यही सिद्धान्तले काम गर्छ । हामी पनि विस्तारै इमानदारिता र निष्ठा गुमाउँदै गएका छौं । नेपाली सिने क्षेत्रका लागि यो पटक्कै राम्रो संकेत होइन ।’
रंगकर्मी अशेष मल्ल हरेक क्षेत्रमा हावी राजनीतिको अन्त्य भए देशको उन्नति हुने बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा त ०६२⁄०६३ को आन्दोलनपछि देशमा राजनीति यसरी हावी भयो कि सबैजसो क्षेत्रमा मानिस आफ्नो काम छोडेर राजनीति गर्न थाले । आफ्नो पेसा र वर्गका लागि काम गर्नुपर्नेमा सबैजसो राजनीतिमा लाग्दा आर्थिक उन्नतिको पाटो पछाडि पर्न गयो । नेपालमा विकासका लागि बजेट नभएको पनि होइन, तर सबैजना कमिसनको चक्करमा लाग्दा बजेटअनुसारको काम नै हुन सकेन ।
चरमरूपमा भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचार मात्र रोक्न सके पनि देशको धेरै प्रगति हुन्छ’, अशेष भन्छन्– ‘अर्को कुरा देशको विकास हुन सक्ने टुरिजम सेक्टरबाट पनि हो । टुरिजमलाई बढावा दिन सक्यो भने देशको उन्नति सम्भव छ । कृषि क्षेत्रलाई अझ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने विदेशमा गएका नेपाली पनि स्वदेश फर्कनेछन् । उनीहरूलाई देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ अशेषले नाट्य र कला क्षेत्रबाट पनि राष्ट्रको उन्नति गर्न सकिने देखेका छन् । ‘हामी हाम्रो क्षेत्रबाट पनि राष्ट्रको उन्नति र विकासमा योगदान गर्न सक्छौं । यही सोचेर हामी सर्वनाम थिएटरबाट आगामी अप्रिल महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव गर्दै छौं । जसमा विभिन्न देशका रंगकर्मी भेला हुनेछन् । रंगकर्मबाट पनि पर्यटनमा सघाउन सकिने सोचेर यसलाई थिएटर टुरिजम नाम दिइएको छ । विदेशीहरू हिमाल पहाड हेर्न मात्र नेपालमा आउने होइन, थिएटर पनि टुरिजमको क्षेत्र हुन सक्छ भनेर हामी लागि परेका छौं’ –अशेषले भने ।
संगीतकार दीपक जंगम राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी लागि परे देशको उन्नतिमा हुनेमा जोड दिन्छन् । ‘सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर प्रयास गर्यो भने देशको उन्नति असम्भव विषय नै होइन । देशलाई कला र संगीतको क्षेत्रबाटै पनि आर्थिक समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ’, जंगम भन्छन्– ‘संगीतको क्षेत्रबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लान सकिन्छ । हाम्रोमा जे चिज छ, त्यसले नेपालको महङ्खवलाई दर्शाउन सकिन्छ । यो आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो सोच बन्न सक्छ ।
मान्छेले बुझेको तर नबुझेजस्तो गरेको विषय हामीसँग धेरै छन् । हाम्रा मौलिक संगीत र कला संस्कृति जसलाई विदेशीहरू आश्चार्यका रूपमा लिन्छन्, बार–बार हेर्न चाहन्छन् । अरु देशमा सबैभन्दा बढी आम्दानी खेलकुद र संगीतबाट हुन्छ । हामीकहाँ यसबारे सोचिएकै छैन । यसलाई अभियानकै रूपमा लगेर थोरै समयमै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । अहिले त राजनीतिबाहेक केही भएको छैन । राजनीतिज्ञ जहाँ पैसा छ, त्यहीं मात्र लागेका छन् । सरकारले कला र संगीत भनेको मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र भन्ने गलत बुझेको छ । आइडिया भएको मान्छे त्यहाँ जाँदैन, पुग्दै पुग्दैन । त्यसले गर्दा पनि यो दिशामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।’
अभिनेता तथा निर्माता, निर्देशक भुवन केसी विकासका लागि भ्रष्टाचार हटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संसारको इतिहास हेर्ने हो भने बाटोघाटको विकास नम्बर वान हुन आउँछ । त्यसपछि विकरालरूपमा रहेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी हावी हुन्छन्, त्यहाँ विकास सम्भव हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो देशमा भएको स्रोत उपयोग गरी जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ’, भुवन भन्छन्– ‘अर्को हामीले चलचित्र क्षेत्रबाटै पनि देशको उन्नति गर्न सक्छौं भन्ने कुरा भुलिरहेका छौं । त्यसका लागि नेपाली चलचित्रलाई दूरदर्शी सोचबाट संसारभरि पैmलाउनुपर्छ । हाम्रो चलचित्रलाई संसारभर फैलाउन सक्यो भने डलर, यान, पाउन्ड नेपालमै भित्रिन्छ । त्यो खोज्न अन्त कहीं जानै पर्दैन । भाषा संस्कृति र टुरिजमको पनि विकास हुन्छ । चलचित्र भनेको केवल मनोरञ्जन मात्र होइन भन्ने जान्यो भने अर्बाैं खर्बाैं कमाइ यसबाटै सम्भव छ । त्यसका लागि राज्यले नै ठोस नीति निर्माण गरी लागू गराउन सक्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ । ’
नायिका, निर्मात्री तथा निर्देशक रेखा थापा भने महिलालाई आत्मनिर्भर बनाए मात्र देशले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने बताउँछिन् । ‘हामी जहिले पनि आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौं, तर महिला आत्मनिर्भर भए मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । जबसम्म महिला आत्मनिर्भर हुँदैनन्, आर्थिकरूपमा देशको उन्नति हुनै सक्दैन । जसले जुन ठाउँबाट जसरी जे काम गरे पनि घरभित्र लोग्नेमान्छेजस्तै आइमाई मान्छे पनि आत्मनिर्भर भए मात्र देश समृद्ध हुन्छ ।
पुरुष र नारी दुवै जनाले काम गरे एक जनाको आम्दानीले घर व्यवहार चल्छ भने अर्कोको वचत हुन्छ र त्यो परिवारको उन्नति सम्भव हुन्छ । आधा आकाश ढाकिएका नारीलाई अगाडि नबढाएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन’, रेखा भन्छिन्– ‘आफ्नो सीपले भ्याएसम्म नारीले जस्तो पनि काम गर्दा हुन्छ । भरसक छोरीबेटी मान्छे बाहिर काम नगरे हुन्छ भन्ने सोचबाट हामी टाढा हुनुपर्छ । त्यो स्थिति आयो भने आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । अहिले म तीनै महिलाको विषयमा काम गरिरहेको छु ।’
निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेत निर्णायक तहमा बस्नेहरूको नियत ठीक भए देशको उन्नति सम्भव देख्छन् । ‘देशको आर्थिक विकास गर्ने भए धेरै ठाउँ छ, तर यसका लागि सबैभन्दा पहिला निर्णायक तहमा बस्नेहरूको नियत ठीक हुनुपर्छ । माथिल्लो लेभलको नेतादेखि लिएर तल्लो लेभलका कामादारसम्ममा असल नियत देखिँदैन । यदि सबैमा राम्रो गर्छु भन्ने सोच आयो भने आर्थिक उन्नति टाढा छँदै छैन’, निश्चल भन्छन्– ‘जुन क्षेत्रमा पनि त्यही हो । कला र फिल्म क्षेत्रबाट हामीले जे भइरहेको छ, त्यो उठान गर्ने हो । सबै फिल्म कमर्सियल हुँदैनन् । आम जनमानसलाई इन्सपायर गर्ने फिल्म पनि अलि–अलि बनिरहेको छ । तर, त्यस्तो सोच राख्ने मेकरको अलि खाँचो छ । फिल्मले समाजलाई दिने भनेको राम्रो मेसेज हो । हामी पनि काममा इमानदार हुनुपर्छ । इमान्दारीपूर्वक गरेको सानो प्रयासले पनि ठूलो रिजल्ट दिन्छ ।
हास्य अभिनेता दीपकराज गिरी सबै तहमा इमानदारिता हुने हो भने आर्थिक समृद्धि टाढा नभएको ठोकुवा गर्छन् । ‘मलाई लाग्छ पीएनले पिउनकै काम हन्डे«ड पर्सेन्ट गरिदिए, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले इमानदारिता साथ आफ्नो काम गरिदिए पुग्छ, अरु केही गर्नै पदैन । तर, यहाँ त पीएनले पीएनको काम नै गर्दैन, अरु थोक पनि गर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिँदैनन्’, गिरी उदाहरण अघि सार्छन्– ‘म कलाकार हुँ, तर कलाकारिता मात्र गर्दिनँ । राजनीति पनि गर्न थाल्छु । प्रशासक, कर्मचारी, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर आम नागरिकले व्यक्तिगत लाभ नलिई शतप्रतिशत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिए मात्र पनि मुलुक समृद्ध हुन समय नै लाग्दैन । जिम्मेवारी बहन नगर्नु र इमानदार नहुनुले गर्दा आर्थिक समृद्धि हुन नसकेको हो । यति मात्र हुने हो भने विकास टाढाका विषय नै होइन ।’
नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी आर्थिक उन्नतिका लागि आत्मनिर्भरतालाई जोड दिन्छन् । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा आर्थिक समृद्धिबिना देश कहिले माथि जान सक्दैन । त्यसैले विश्वबाट दान मागेर ल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो देशको कल–कारखाना चल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । स्वदेशमै श्रमको सिर्जना गरी रोजगारका लागि देशबाहिर गएका युवा जनशक्तिलाई फर्काउन सक्नुपर्छ । सबैले केव स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने युवा जनशक्तिले पनि स्वदेशमै काम पाउँछ ।
युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी देशको उद्योगधन्दालाई बचाउन सक्नुपर्छ’, आकाश भन्छन्– ‘हाम्रो सुगर मिल, कागज कारखाना, सिमेन्ट कारखाना, टायर कारखाना बन्दप्रायः अवस्थामा छन् । यसलाई मात्र बचाउन सकेको भए पनि युवा जनशक्ति बाहिरिनै पर्दैन थियो ।’ उनले थपे– ‘मेरो क्षेत्रबाट हामीले फिल्म निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्ने हो, गरी पनि रहेका छौं । यसबाटै आयकर बुझाउनुपर्छ । हामी चलचित्र क्षेत्रबाट टुरिजमलाई सहयोग गर्न सक्छौं । तर, सबै पक्षबाट इमानदारीपूर्वक प्रयास हुनु आवश्यक छ ।’
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटी नेताहरूको संस्कारमै परिवर्तन हुन जरुरी मान्छन् । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेताहरूमा देशलाई माथि लानका लागि त्यो संस्कारको विकास हुनु जरुरत छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि कसैले केही गरेन भन्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ । सकरात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिक, उद्योग व्यवसायीले पनि देशको हित सोच्नुपर्छ’, उनी भन्छन्– ‘नेताहरूले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्छ । कला क्षेत्रबाट पनि नेता र राज्यलाई मात्र दोष दिनेभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा इमानदारितापूर्वक सक्रियता देखाउनुपर्छ । खुट्टा तान्ने र दोष दिनेभन्दा पनि कामै गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।’
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजकी अध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठ भागवण्डाको राजनीति त्यागेर देशका लागि काम गरेर मुलुक आर्थिक समृद्धिमा जाने बताउँछिन् । ‘सबैभन्दा पहिले त म र तँ, मेरो र तेरो भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ । हामी सबैले देशका लागि भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ । भागवण्डाको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ’, सुचित्रा भन्छिन्– ‘चलचित्र क्षेत्रबाट पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान गर्न सकिन्छ । जग्गा जमिनको कारोबार गर्दा लाभकर लाग्छ । हाम्रो चलचित्रले पनि यति लगानी भयो, यति कमायो, यति लाभ भयो भन्ने कुरा आइरहन्छ । तर, लाभकर लाग्दैन । जग्गा जमिनमा जस्तै चलचित्रबाट भएको मुनाफामा पनि लाभ कर लगाएर चलचित्र क्षेत्रबाट मुलुकलाई योगदान गर्न सकिन्छ । तर, त्यो लाभकर सही ठाउँमा सदुपयोगचाहिँ हुनुपर्छ ।’